Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee loo xayeysiin karo liiska Amazon ee iibiyeyaasha soo iibsiga?
Amazon waa mashiinka raadinta ugu weyn aduunka, ugu yaraan mid ka mid ah wax ka qabashada iibka internetka ee wax kasta oo aad malayn karto. Iyo in aad tahay iibiye soo iibsanaya halkaas, waa inaad ogaataa sharciyada ugu muhiimsan ee ciyaarta si ay u noolaadaan in suuqaasi aad u badan ee suuqa si aad uugu fududaato. Iyo habka ugu wanaagsan ee aad u abuuri karto meel adag oo loogu talagalay horumarkaaga ganacsiga waa in la dhejiyo liiskaaga Amazon ee keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan si aad sheygaaga u bixiyaa u muuqdaan mid si cad u ah SERPs sheyga. Taasi waa sababta hoosta aan ku socdo si aan kuu siiyo talooyin kooban iyo tabaha si aad u hagaajisid liistooyinka Amazon sida pro, xitaa haddii aad weli raadineyso sida iibiyaha asxaabta ah oo qaadaya tallaabooyinkiisii ​​ugu horeeyay ee iibka ugu dambeeyay ee ku guuleysiga halkaas - найти посылку по номеру укрпочта.
Sidee loo fududeeyaa Amazon Listings Sida Pro
Ka hor inta wax kale, aynu soo hor jeedno - Amazon raadinta raadinta had iyo jeer waxay ku bilaabantaa qaabaynta bogga faahfaahsan wixii alaab ah oo aad ku iibsatay iibka. Iyadoo abuureysa qodobbadan ee bogga faahfaahsan ee sheygaaga, waa muhiim inaad si sax ah u buuxiso si aad u qorto bogga dhabta ah ee wax soo saarka ah oo hagaajin doona macaamil kasta oo macquul ah si aad u iibsato iibsiga kama dambaysta gaar ahaan adiga, iyo meel kale. Taasi waa sababta aan kugula talineyno qaabaynta qaybaha muhiimka ah ee bogga faahfaahsan ee alaabtaada si aad u hagaajiso liiskaaga Amazon, sida soo socota:
Qodobka 12aad -. Samee sida saxda ah oo raaxo leh Amazon guud ee guud ee alaabooyinka sheyga sida ugu macquulsan. Sidaa ku samee, xasuuso - astaanta alaabtaadu waa meesha ugu fiican ee aad ku dhejin laheyd ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah iyo jumlado raadin dheer ah oo ku saabsan hoos u dhac ku yimaada muhiimadooda. Xasuusnow, si kastaba ha ahaatee, in si xoog leh lagula taliyo inaad ka fogaato wixii ereyada muhiimka ah ee loo isticmaalo labadaba sheygaaga sheyga, iyo qaybaha kale ee bogga wax soo saarka ee aad leedahay.
dhibcooyinka cirbadaha - qaybtan bogga faahfaahsan ee badeecada waxaa badanaa la dhisaa shan boodhadh. Ka dhig mid keliya oo ah macluumaadka ugu muhiimsan si ay u qeexaan astaamaha asaasiga / faa'iidooyinka sheygaaga on sale. Xaqiiqdii, liiskan "liiska" ee ra'yiga waxaa loogu talagalay inuu dib u sooceliyo macluumaadka ugu muhiimsan ee horay loogu soo bandhigay sheygaaga sheygaaga.
Tafsiirka sheyga - xaqiiq ahaan, waa qayb ballaadhan oo ka mid ah liisaskaaga liiska. Habkaas, sharaxaadda alaabtaada waxaa loola jeedaa in lagu muujiyo sifooyinka ugu muhiimsan ee sheyga iibka, oo lagu taageerayo waxyaabaha guud ee isticmaalka / dayactirka maalin kasta. Tixgeli oo ku dar halkan sifooyinka soo socda: cabbirada waxsoosaarka, da'da / xirfadda ku haboonaanta, waxyaabaha iyo shuruudaha badeecada, gobolka asalkiisa, iyo wixii la mid ah. Fiiro, si kastaba ha ahaatee, waa inaadan marnaba ku darin macluumaadka ku saabsan soo saaraha iyo qiimaha, ama xog kasta oo loogu talagalay ujeedooyin xayeysiinta furan.
Sawirada Qalabka - waxay u taagan tahay sawirrada muuqaalka ah iyagoo siinaya sharaxaad dheeri ah iyo muuqaal guud oo muujinaya dhinac kasta oo ka mid ah shaqooyinka waaweyn iyo hababka isticmaalka. Qeybtan waxaa lagu talinayaa in lagu daro lix ama todoba sawirro wax soo saarka, kuwaas oo si buuxda ugu qancinaya macaamil kasta oo suurtagal ah oo u arkaa inuu iibsanayo.